‘कथा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ’ : रेखा थापा « Ramailo छ
प्रकाशित मिति : Dec 10, 2019
१६ दिने महिला अभियान अन्र्तगत गत साता जनकपुरमा महिला नेतृत्वकर्ताहरुको सहभागीतामा एउटा समारोह आयोजना गरिएको थियो । त्यसमा नायिका तथा सामाजिक अभियान्ता रेखा थापा सहभागी भएकी थिइन् ।
समारोहमा पुर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले रेखालाई देशका महिलाका अवस्था प्रश्न राखेकी थिइन् । जसमा रेखाले केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु समारोहमा राखेकी थिइन् । रेखाले बोलेका केही महत्वपूर्ण भनाईहरु यस प्रकार छन् ।
महिलाहरुलाई महिला बन्ने तालिम दिइन्छ । महिला बन्ने तालिम बन्द गर्नु पर्यो । महिला आफैले आफुभित्र बाटै बिद्रोह गर्न सक्नु पर्यो ।
यहाँ छोरी मान्छेलाई जहाँपनि दर्शक बनाए राखिन्छ । महिला आफैपनि आश्रित भैरहेका छन् । महिला सक्रिय भएर अगाडी बढ्यो भने देशको आर्थिक अवस्था पनि मजबुद हुन्छ ।
विश्वका तथ्यांक हर्ने हो भने ५५ करोड महिला र २५ करोड पुरुष अशिक्षित छन् । बालिक अवस्थामै बिहे हुन्छ । कतिपय घरेलु हिंसाको घटना दर्ता नै हुँदनैन् । हरेक दिन महिलाहरु सुत्केरी हुन नपाएर मर्छन् । यसरी महिलाको विकास कसरी हुन्छ ?
महिलाले भ्रष्टचार गरेका कमै सुनिन्छ । सत्ताका महिला पनि कोटामा सिमित छन् । महिलालाई किन कोटामा राखिन्छ ? महिलालाई देश सञ्चालन गर्न दिएको खण्डमा भ्रष्टचार पक्कै कम हुन्छ ।
सत्तामा भएका पुरुषले महिलालाई जहिल्यै पनि दोश्रो दर्जामा राखेर हेर्छन् । यसको लागि कथा नै परिवर्तन हुन आवश्यक छ । महिलाले भूमिका परिवर्तन गर्ने हो भने महिला स्वतः शशक्त हुन्छन् ।